WOWOW Black 4 Hole Centerset Bridge Vintage Farmhouse Kitchen Sink Faucets miaraka amin'ny Side Sprayer
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucet an-dakozia an-dakozia / WOWOW Black 4 Hole Centerset Bridge Vintage Farmhouse Kitchen Sink Faucets miaraka amin'ny Side Sprayer
[Mikarakara ny fahasalamanao】 Ny faucet tetezana mavesatra dia vita amin'ny varahina mivaingana, tsy harafesina, tsy misy entona. Ny kalitaon'ny rano dia azo antoka amin'ny teknika tsy manam-paharoa amin'ny fisorohana ny firaka sy ny fisondrotana, izay mahasoa amin'ny fomba fiaina ara-pahasalamana.
[Manamora ny fiainanao】 Amin'ny tsindry bokotra iray, ny sprayer amin'ny lafiny varahina avo lenta dia afaka manondraka rano mikoriana mafy hanadiovana lovia sy loto ao an-joro. Ny hosotra tafiditra dia azo esorina hatramin'ny 59 santimetatra, izay mora diovina amin'ny toerana rehetra manodidina ny rano.
[Easy Installation】Ny faucet antique varahina an-dakozia dia fanampin'ny lakoziao. Ny faucet an-dakozia Vintage dia miaraka amin'ny fitaovana ilaina rehetra sy ny torolalana ho an'ny mpampiasa, izay manamora ny fametrahana amin'ny 30 minitra.
Ampahany : 23115A1B Sokajy: Faucet an-dakozia an-dakozia, Fitaovana an-dakozia
17.48 x 13.27 x 2.87 santimetatra
Faucet an-dakozia misy sprayer amin'ny sisiny, fantson-drano, fitaovana fametahana